Rubber Extruder - Mpamatsy Extruder Rubber China, Factory –Jwell
Mba hihaonana amin'ny filan'ny tsena dia namolavola extruder rubber mangatsiaka vaovao ny orinasanay. Ny toetra mampiavaka an'ity karazana extruder ity: ny rafitra fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso fisarahana miavaka; ny fitaovana vita amin'ny fingotra dia terena hanina amin'ny alàlan'ny tsindry fanerena; fametrahana plastika ambany-hafanana, avo lenta ary fanjifana angovo ambany. Ny vokatra fitrandrahana toy izany dia be mpampiasa amin'ny fiara, fiarandalamby, sambo, fananganana, silikôla, tariby na tariby ary indostria hafa mampiasa tombo-kase.
Barika sy visy ho an'ny milina fanindronana
JWZ-BMQC3D-1000 Masinina mitsivalana mitsivalana telo-refy